«An’iza ny lamba mihahy?» -
AccueilTresaka«An’iza ny lamba mihahy?»
«An’iza ny lamba mihahy?»
12/05/2018 admintriatra Tresaka 0
« Depiote miady amin’ny kolikoly… ». Izany hatrany no ambetin-tenin’ireo solombavambahoaka MAPAR sy TIM tato anatin’ny iray volana latsaka kely izao. Iza anefa no tsy mahafantatra fa i Mamy Ravatomanga no mamatsy vola io hetsika io, nanomboka tamin’ilay fidinana an-dalambe nokasain’i Andry Rajoelina natao tany Mahajanga. Voatonontonona ho mpamatsy ara-bola ny hetsika ihany koa i Sylvain Rabetsaroana, izay hita tany Mahajanga teo anilan’i Mamy Ravatomanga rahateo.
Fa “an’iza ny lamba mihahy” amin’izao fotoana, iza no nanokanan’ny hainoamanjery frantsay pejy manokana amina resaka kolikoly sy fanodinkodinam-bolam-panjakana? Tsy ilay mpamatsy vola ny hetsik’ireto depiote milaza azy ho “miady amin’ny kolikoly” ireto ve no nataon’ny gazety lohateny vaventy e? Dia hanao inona hono izao ry Christine Razanamahasoa, Rossy, Lanto Rakotomanga, Naivo Raholdina, Roberto Tinoka an-daniny, me Hanitra, Félix Randriamandimbisoa sy ny forongony? Hametraka fitoriana eny amin’ny Bianco koa sa ahoana?
Nankaiza ihany koa ny filohan’ny SMM, kalaza amin’ny fametrahana fitoriana eny amin’ny Bianco sy ny fanaovana fanambarana, mahavita mankany ivelany mihitsy miakatra amina fahitalavitra vahiny?
Asehoy amin’ny vahoaka malagasy fa tena mitombina, ary tena tombontsoa ambonin’ny firenena marina no anton’izao hetsika ataon’ny MAPAR sy ny TIM izao. Tokony hasehon’izy ireo amin’ny vahoaka fa tsy an-kifidy tavan’olona ny ady amin’izany kolikoly izany fa ady iraisan’ny vahoaka malagasy mantonolo, izany hoe, tokony hametraka fitoriana ho an’i Mamy Ravatomanga izy ireo.
Any amin’ny Bianco ihany koa ny baolina amin’izao fotoana. Tsy tokony hiandry fitoriana mipetraka akory ny Bianco fa avy hatrany dia manokatra fanadihadiana, mampiantso mpanao gazety manao valandresaka ary efa miampanga avy hatrany tahaka ny fanaon’ny tale jeneralin’ny Bianco tato ho ato izay. “An’iza ny lamba mihahy e?”.